ပျိုမေတို့အတွက် ကမ်းခြေဖက်ရှင်များ - Shop
ပျိုမေတို့အတွက် ကမ်းခြေဖက်ရှင်များ0974
The KaungHtet February 6, 2020 4:17 am January 13, 2022
🌊 ကမ်းခြေမှာ ပျိုမေတို့အတွက် အဝတ်အစားတွေ ရွေးချယ်မှု မမှားအောင် ဘယ်လိုဝတ်ဆင်ကြမလဲ …🌊
ပျိုမေတွေအတွက် ဖက်ရှင်ဆိုတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့အလှကိုထင်ပေါ်မို့အတွက် အင်္ကျီလှလှလေးတွေကို ရွေးချယ်ကြတာ သဘာဝပါ … ကိုယ်နဲ့မလိုက်ဖက်တဲ့ ဖက်ရှင်မျိုးကို ရွေးချယ်မိတာမျိုး မဖြစ်အောင် ကမ်းခြေမှာလည်း ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ကိုယ့်အလှတွေထင်ပေါ်နေမို့အတွက် ဘယ်လိုအဝတ်အစားမျိုးတွေကို ရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးသွားမှာပါ … 🏖️
ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလှတရားတွေ စတိုလ်ကျမှုတွေနဲ့ အလှပဆုံးတွေဖြစ်အောင် သင့်လျော်တဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ အမိုက်စားဂါဝန်လေးတွေနဲ့ ဘောင်းဘီလှလှလေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ် ….💃🏻
ကမ်းခြေမှာ ပျိုမေတို့အတွက် ဘောင်းဘီတို ဝတ်ဆင်မှုဟာ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးမှုကို ဖော်ပြသလိုဖြစ်ပြီး ငယ်ရွယ်တက်ကြွမှု၊ လွတ်လပ်မှု နှင့် လန်းဆန်းစေတဲ့ အသွင်မျိုးကိုဆောင်စေပါတယ် … ဘောင်းဘီတိုလို့ပြောလိုက်ရင်တော့ ဂျင်းဘောင်းဘီတိုသာမက အရောင်စုံလေးတွေနဲ့ လှပကျော့ရှင်းမှုကိုပေးတဲ့ ကာလာရောင်ဘောင်းဘီလေးနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ရင်တော့ သင့်ရဲ့ ငယ်ရွယ်လှပပြီး ကျော့ရှင်းမှုတွေကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ….
ကမ်းခြေလေးမှာ ပျိုမေတို့ရဲ့ အလှတရားများကို ပုန်းကွယ်မထားဘဲ ထုတ်ဖော်ပြသတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ဂါဝန်လှလှလေးတွေကို သတိရလိုက်ပါတော့နော် … သင့်ရဲ့ဘော်ဒီလှပမှုကို ဖုံးကွယ်မထားဘဲ ယုံကြည်မှုရှိရှိဖြင့် ဂါဝန်ပါးလွှာလွှာလေးကို လည်း မမေ့ထားသင့်ပါဘူးနော် ….
ကမ်းခြေလေးမှာ တောက်ပပြီးလှလည်းလှချင်တယ် အဖြူရောင်လေးကို ကြိုက်နှစ်သက်ရင်တော့ အဖြူရောင်ဂါဝန်ရှည်လေးကလည်း လှနေတာထက်ပိုပြီး သင့်ကိုပိုမိုလှပစေနိုင်တဲ့ ဖက်ရှင်တစ်မျိူးဖြစ်လို့ ရွေးချယ်မို့ မမေ့သင့်တဲ့ ဂါဝန်လေးတစ်ခုပါပဲ …
ဂါဝန်အစင်းကြောင်းလေးတွေကို ရွေးချယ်မိပြီဆိုရင်တော့ သင့်ကိုပိုပြီး ရှည်လျားတဲ့အသွင်ကို မြင်စေနိုင်တဲ့ အပြင် သင့်ရဲ့ကျော့ရှင်းမှုကိုလည်း အကုန်လုံး ငေးမောနေမိစေမှာပါ …
ကြိုးတစ်ချောင်းလေးနဲ့ အရောင်သွေးစုံတဲ့ ဂါဝန်မျိုးကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကမ်းခြေအလှဆိုတာ သင့်အလှကို ဖုံးမလွှမ်းနိုင်ဘဲ ရှုံးနိမ့်သွားမှာ အမှန်ပဲပေါ့ …
ယုံကြည်မှုရှိပြီး အနက်ကိုမှ ကြိုက်တတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် ကြိုးတစ်လုံးနှင့် ဂါဝန်ရှည်ကို ရွေးချယ်ရင်တော့ သင့်ကို ယုံကြည်မှု လှပမှုတွေကို တိုးပေးထားမှာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့အလှမှာ ပျော်ဝင်သွားမယ့်သူဆိုတာ ရေတွက်လို့တောင် ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး ….
ဒီအနက်ရောင် Shoulder-off ဂါဝန်လေးကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ လှပတဲ့ ပုခုံးလေးကို မြင်စေနိုင်မယ့်အပြင် ဂါဝန်အောက်ခြေတွင် အမွှေးလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတော့ သင့်ရဲ့ ကမ်းခြေဖက်ရှင်ဟာ အလှပဆုံး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ….
ဂါဝန်လေးကိုမှ လုံလုံခြုံခြုံဖြစ်စေမယ့်အပြင် သင့်ရဲ့ ဂါဝန်က မညီညာတဲ့ အနားလေးတွေကြောင့် ကမ်းခြေမှာ သင့်ရဲ့ ဖက်ရှင်ဟာ အများနဲ့မတူဘဲ ထင်းထွက်နေမှာ အမှန်ပဲပေါ့….
🛒 ကမ်းခြေစတိုင်လ် အမျိုးသမီးဝတ် ဖက်ရှင်များကို ဒီလင့်ခ်တွင် > > > http://bit.ly/2GZ9Kqo < < < ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် …
🔴 ဈေးနှုန်းများသည် ရောင်းချသူနှင့် အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
Shop app ကို download ရယူရန် – http://bit.ly/2SjcJ0i
Shop app ကို သုံးပြီး ဈေးဝယ်မယ်ဆိုရင် –
🚚 ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း(၁၄)ခုနေရာအနှံ့ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ပစ္စည်းအိမ်ရောက်မှ ငွေပေးချေလို့ရတဲ့ စနစ် (Cash On Delivery) လည်းရှိပါတယ်။
Previous Articleကျန်းမာလှပတဲ့ အသားအရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် အသင့်ရှိနေတဲ့ Innisfree Green Tea Balancing Skin CareNext Articleသင့်စိတ်ကြိုက် Basketball တွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မယ့် Shop.com.mm